မာတီနယ်လီ ဘယ်သူလဲ? ဘယ်လိုကစားသမားမျိုးလဲ? ဘာတွေလေုပ်ပြခဲ့သလဲ? - Myanmar Football Arena
မာတီနယ်လီ ဘယ်သူလဲ? ဘယ်လိုကစားသမားမျိုးလဲ? ဘာတွေလေုပ်ပြခဲ့သလဲ?
Articles, News, Premier League
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လက်ရှိရာသီ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားခေါ်ယူမှုအဖြစ် ဘရာဇီးလ် ကြယ်ပွင့် ဂါဘရီယယ် မာတီနယ်လီကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၆.၀၃ သန်းနဲ့ အပြီးသတ်ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကစားသမားလေးကို ခေါ်ယူဖို့ ဥရောပ ထိပ်တန်းကလပ်အသင်းအများအပြားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပြီး အသင်းရဲ့ နည်းစနစ်ဒါရိုက်တာသစ်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတဲ့ အီဒူး ဂက်စ်ပါနဲ့ ကင်းထောက်ချုပ် ကာဂျီယာဂျီယိုတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်သာ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂန်းနားတွေဟာ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ အဆိုပါ ကြယ်ပွင့်လေးကို ခေါ်ယူဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလကတည်းက ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး သဘောတူညီချက်တွေ စောစောစီးစီးရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အသင်းသားဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတော့ လိုက်လျောမှုအမျိုးမျိုးနဲ့အတူ အချိန် ၂ လ ကျော် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အပြောင်းအရွှေ့ အပြီးသတ်ဖို့ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသလို ကစားသမားဟာ ဘရာဇီးလ် ပတ်စ်ပို့တစ်ခုသာရှိတာကြောင့် EU နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အတွက် အီတလီပတ်စ်ပို့ ပြုလုပ်တာကိုပါ စောင့်ပေးခဲ့ရတာပါတယ်။
ဒီမှာ မေးခွန်းရှိလာတာက ဒီဘရာဇီးလ်သားလေးဟာ ဘယ်လောက် ကောင်းနေလို့ အာဆင်နယ်ဘက်က ခုလို လိုက်လျောနေရတာလဲ။ ၁၈ နှစ်သား လူငယ်တစ်ယောက်အတွက် ဘာကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းက မျှော်လင့်ချက် ကြီးကြီး ထားနေတာလဲ။ ကမ္ဘာကျော် Forbes မဂ္ဂဇင်းကြီးကတော့ မာတီနယ်လီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။
မာတီနယ်လီဟာ အာဆင်နယ်အသင်းထံ မရောက်ခင်တုန်းက မန်ယူအသင်းနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတွေဆီကို ရောက်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းခဲ့သလို လာမာဆီယာအကယ်ဒမီကိုလည်း ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါကြယ်ပွင့်လေးကို ခေါ်ယူဖို့ နှစ်သင်းလုံး လက်လျှော့သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ပက်စ်ပို့ပြဿနာနဲ့ အသက်အရွယ် ပြဿနာပါ။ မန်ယူနဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ စတင်ကြိုးပမ်းကြချိန်တုန်းက ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းကပါ။ အဲ့အချိန်တုန်းက သူ့ရဲ့ အသက် ၁၄ နှစ် ကျော်ကျော်သာရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အချိန်ကောင်းမှာ ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပတ်စ်ပို့ရဖို့နဲ့ ၁၈ နှစ်ပြည့်ဖို့ကို အချိန်ယူစောင့်ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ ဘရာဇီးလ်ကြယ်ပွင့်လေးဟာ ဂျူဗင်တပ်တိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုကို အားကျသူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ကစားဟန်မှာလည်း ရော်နယ်ဒိုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်စတုတ္ထတန်းကလပ် အီတူယာနိုမှာကစားနေပေမယ့် သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ဘရာဇီးလ် လက်ရွေးစင် နည်းပြ တီတီကိုယ်တိုင် မျက်စိကျလောက်တဲ့အထိ ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်ခင်မှာတင် ကိုပါ အမေရိကပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် ဘရာဇီးလ် လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးရဲ့ ပဏာမ လူစာရင်းကို ခေါ်ယူခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ထိပ်တန်းကစားသမားတွေနဲ့ အတူတွဲဖက် လေ့ကျင့်ခွင့်ရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
မာတီနယ်လီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွင်း ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ချို့ကို ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး ထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေ သူ့ကို မျက်စိကျလာအောင် ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုရင်သီယန်၊ ဆန်တို့စ်၊ ပါးလ်မီးရက်စ်နဲ့ ဆော်အို ပေါ်လိုတို့လို ထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ကမ်ပါအိုနာတို ပေါ်လစ္စတာအမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲမှာ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံးအသင်းမှာ ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘရာဇီးလ်ကြယ်ပွင့်လေးရဲ့ လူငယ်ကစားသမားဘဝ ဖြတ်သန်းမှု မှတ်တမ်းကလည်း အံ့အားသင့်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး ကိုရင်သီယန် လူငယ်အသင်းမှာ ကစားစဉ်တုန်းက ပွဲပေါင် ၂၄၈ ပွဲကစားရာမှာ သွင်းဂိုး ၂၀၂ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ထားသလို အီတူယာနို လူငယ်အသင်းမှာလည်း ၉၂ ပွဲကစားရာမှာ ၆၄ ဂိုးအထိ သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ စီနီယာအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း ၁၄ ပွဲကစားရာမှာ ၆ ဂိုးသွင်းယူပြီး ဂိုးဖန်တီးမှု ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘောလုံးပေးပို့မှု တိကျမှုနှုန်း ၇၈% ရှိသလို လိမ်ခေါက်ဖြတ်ကျော်မှု ၃၂ ကြိမ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ခံစစ်စွမ်းဆောင်ရည်မှာလည်း ဖျက်ထုတ်မှု ၁၁ ကြိမ်၊ ကြားဝင်ဟန့်တားမှု ၁၀ ကြိမ်နဲ့ အမြင့်ဘောရယူမှု ၁၂ ကြိမ်အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ အချက်အလက်တွေက ဖော်ပြနေပါတယ်။ Forbes ကတော့ မာတီနယ်လီဟာ ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် အတားအဆီးမရှိ ဂိုးသွင်းမယ့် ကစားသမားမျိုးလို့ တင်စားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး မာတီနယ်လီရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းက ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို ၄၅ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူသွားတဲ့ ရိုဒရိုင်ဂိုရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ထက် သာလွန်နေတယ်လို့ ဘရာဇီးလ်မီဒီယာတွေက နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး တန်ကြေးကွာခြားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ရိုဒရိုင်ဂိုက ဆန်းတို့စ်အသင်းမှာ ကစားနေတာကြောင့်လို့ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဘရာဇီးလ် စတုတ္ထတန်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းက ၁၈ နှစ်သား ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက် လက်ရွေးစင် အိပ်မက်နဲ့ ဥရောပထိပ်တန်းလိဂ်တစ်ခုကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုတဲ့ အချက်တွေဟာ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါးလွန်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မာတီနယ်လီကတော့ ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက သူ့ရဲ့ နာမည်ကို ဘရာဇီးလ်တိုင်းပြည်တစ်လွှားမှာ ရေပန်းစားလာအောင် ကြယ်ပွင့်လေးက စွမ်းဆောင်ပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲမှာ အီတူယာနိုက ဆော်ပေါ်လိုအသင်းကို အနိုင်ယူပြချိန်မှာ မာတီနယ်လီဟာ ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကို ရောက်သွားခဲ့တာလို့ Forbes ကဆိုပါတယ်။
မာတီနယ်လီဟာ အာဆင်နယ်နည်းပြ အမ်မရီအတွက် အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်လက်နက်ပုန်း တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့လည်း သုံးသပ်ခံနေရပါတယ်။ လျှင်မြန်မှုနဲ့ အဆုံးသတ်သေချာမှုက သူ့ရဲ့ အားသာချက်ဖြစ်သလို တိုက်စစ်မှာ နေရာစုံကစားနိုင်မှုကတော့ အပိုဆုပါပဲ။ သူ့ရဲ့ အမြန်နှုန်းမြင့် ရွေ့လျားမှု စွမ်းရည်နဲ့ တစ်ဦးချင်းဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းမြင့်မားမှုက တစ်ချိန်က တိုက်စစ်မှူးဟောင်း သီယာရီ အွန်နရီကို ပြန်လည် အမှတ်ရစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတော့ သူ့အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ကစားသမားက စီ ရော်နယ်ဒိုလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီကြယ်ပွင့်ဟာ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ အများဆုံးထွက်ကစားလေ့ရှိပြီး အထောင်တိုက်စစ်မှူးနေရာနဲ့ ညာတောင်ပံတိုက်စစ်တွေမှာလည်း ကစားနိုင်သလို နောက်ချန်တိုက်စစ်မှူးအဖြစ်လည်း ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ လာကာဇက်နဲ့ အူဘာမီယန်းတို့အတွက် အရံသင့်အစားထိုးနိုင်မယ့် ကစားသမားဖြစ်လာနိုင်သလို တောင်ပံတိုက်စစ်ပြဿနာအတွက် အဖြေတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခိုင်လုံတဲ့သတင်းအရင်းအမြစ်တွေအရလည်း အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ Wonder Kid လို့ တင်စားခံနေရတဲ့ မာတီနယ်လီကို အရံအသင်းကို စေလွှတ်တာမျိုး အငှားချတာမျိုးပြုလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ သိရတာမို့ လာမယ့်ရာသီမှာ မာတီနယ်လီ ဘယ်လိုခြေစွမ်းမျိုးပြသနိုင်မလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရပါတော့မယ်။ မာတီနယ်လီဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရုံးကန်ရတတ်တဲ့ တောင်အမေရိကသားတွေရဲ့ လမ်းစဉ်ကို လိုက်သွားမလား? အစဉ်အလာဆိုးတွေကို ဖောက်ထွက်ပြခဲ့တဲ့ အဂူရို၊ ရီချာလီဆင်တို့လို ကစားသမားမျိုးဖြစ်လာမလား? ဆိုတာကို ပိတ်ကားပြင်ပေါ်မှာ ရှုစားကြရဖို့ မဝေးလှတော့ပါဘူး။
Ref: Forbes, Goal, Various Brazil Media
အာဆငျနယျအသငျးဟာ လကျရှိရာသီ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားချေါယူမှုအဖွဈ ဘရာဇီးလျ ကွယျပှငျ့ ဂါဘရီယယျ မာတီနယျလီကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ ၆.၀၃ သနျးနဲ့ အပွီးသတျချေါယူလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါကစားသမားလေးကို ချေါယူဖို့ ဥရောပ ထိပျတနျးကလပျအသငျးအမြားအပွားနဲ့ ယှဉျပွိုငျခဲ့ရပွီး အသငျးရဲ့ နညျးစနဈဒါရိုကျတာသဈဖွဈလာဖို့ရှိနတေဲ့ အီဒူး ဂကျဈပါနဲ့ ကငျးထောကျခြုပျ ကာဂြီယာဂြီယိုတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကွောငျ့သာ ချေါယူနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဂနျးနားတှဟော အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျသာရှိသေးတဲ့ အဆိုပါ ကွယျပှငျ့လေးကို ချေါယူဖို့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလကတညျးက ကွိုးပမျးခဲ့တာဖွဈပွီး သဘောတူညီခကျြတှေ စောစောစီးစီးရယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အသငျးသားဖွဈလာဖို့အတှကျကတော့ လိုကျလြောမှုအမြိုးမြိုးနဲ့အတူ အခြိနျ ၂ လ ကြျော စိတျရှညျရှညျနဲ့ စောငျ့ဆိုငျးခဲ့ရပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အပွောငျးအရှေ့ အပွီးသတျဖို့ အသကျ ၁၈ နှဈပွညျ့တဲ့အခြိနျအထိ စောငျ့ဆိုငျးခဲ့ရသလို ကစားသမားဟာ ဘရာဇီးလျ ပတျဈပို့တဈခုသာရှိတာကွောငျ့ EU နိုငျငံသားဖွဈခှငျ့အတှကျ အီတလီပတျဈပို့ ပွုလုပျတာကိုပါ စောငျ့ပေးခဲ့ရတာပါတယျ။
ဒီမှာ မေးခှနျးရှိလာတာက ဒီဘရာဇီးလျသားလေးဟာ ဘယျလောကျ ကောငျးနလေို့ အာဆငျနယျဘကျက ခုလို လိုကျလြောနရေတာလဲ။ ၁၈ နှဈသား လူငယျတဈယောကျအတှကျ ဘာကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျးက မြှျောလငျ့ခကျြ ကွီးကွီး ထားနတောလဲ။ ကမ်ဘာကြျော Forbes မဂ်ဂဇငျးကွီးကတော့ မာတီနယျလီနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံသုံးသပျပွခဲ့ပါတယျ။
မာတီနယျလီဟာ အာဆငျနယျအသငျးထံ မရောကျခငျတုနျးက မနျယူအသငျးနဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးတှဆေီကို ရောကျဖို့ နီးစပျခဲ့တဲ့ ကစားသမားဖွဈပါတယျ။ မနျယူအသငျးနဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး ဆငျးခဲ့သလို လာမာဆီယာအကယျဒမီကိုလညျး ရောကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆိုပါကွယျပှငျ့လေးကို ချေါယူဖို့ နှဈသငျးလုံး လကျလြှော့သှားရတဲ့ အကွောငျးအရငျးက ပကျဈပို့ပွဿနာနဲ့ အသကျအရှယျ ပွဿနာပါ။ မနျယူနဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ စတငျကွိုးပမျးကွခြိနျတုနျးက ၂၀၁၅ ခုနှဈတုနျးကပါ။ အဲ့အခြိနျတုနျးက သူ့ရဲ့ အသကျ ၁၄ နှဈ ကြျောကြျောသာရှိပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ အခြိနျကောငျးမှာ ကမျးလှမျးမှုပွုလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး ပတျဈပို့ရဖို့နဲ့ ၁၈ နှဈပွညျ့ဖို့ကို အခြိနျယူစောငျ့ဆိုငျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျသာရှိသေးတဲ့ ဘရာဇီးလျကွယျပှငျ့လေးဟာ ဂြူဗငျတပျတိုကျစဈမှူး ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျဒိုကို အားကသြူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ ကစားဟနျမှာလညျး ရျောနယျဒိုရဲ့ လှမျးမိုးမှုတှေ ရှိနပေါတယျ။ ဘရာဇီးလျစတုတ်ထတနျးကလပျ အီတူယာနိုမှာကစားနပေမေယျ့ သူ့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက ဘရာဇီးလျ လကျရှေးစငျ နညျးပွ တီတီကိုယျတိုငျ မကျြစိကလြောကျတဲ့အထိ ကောငျးမှနျခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အသကျ ၁၈ နှဈမပွညျ့ခငျမှာတငျ ကိုပါ အမရေိကပွိုငျပှဲဝငျမယျ့ ဘရာဇီးလျ လကျရှေးစငျအသငျးကွီးရဲ့ ပဏာမ လူစာရငျးကို ချေါယူခွငျးကို ခံခဲ့ရပွီး ထိပျတနျးကစားသမားတှနေဲ့ အတူတှဲဖကျ လကေ့ငျြ့ခှငျ့ရခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
မာတီနယျလီဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီအတှငျး ထူးခွားကောငျးမှနျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျတဈခြို့ကို ပွသနိုငျခဲ့ပွီး ထိပျတနျးအသငျးကွီးတှေ သူ့ကို မကျြစိကလြာအောငျ ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကိုရငျသီယနျ၊ ဆနျတို့ဈ၊ ပါးလျမီးရကျဈနဲ့ ဆျောအို ပျေါလိုတို့လို ထိပျတနျးအသငျးကွီးတှပေါဝငျယှဉျပွိုငျနတေဲ့ ကမျပါအိုနာတို ပျေါလစ်စတာအမှတျပေးပွိုငျပှဲမှာ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျရညျကိုပွသခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲရဲ့ အကောငျးဆုံးအသငျးမှာ ပါဝငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဘရာဇီးလျကွယျပှငျ့လေးရဲ့ လူငယျကစားသမားဘဝ ဖွတျသနျးမှု မှတျတမျးကလညျး အံ့အားသငျ့ဖှယျဖွဈပွီး ကိုရငျသီယနျ လူငယျအသငျးမှာ ကစားစဉျတုနျးက ပှဲပေါငျ ၂၄၈ ပှဲကစားရာမှာ သှငျးဂိုး ၂၀၂ ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ မှတျတမျးကောငျးပိုငျဆိုငျထားသလို အီတူယာနို လူငယျအသငျးမှာလညျး ၉၂ ပှဲကစားရာမှာ ၆၄ ဂိုးအထိ သှငျးယူပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက ပါဝငျကစားခဲ့တဲ့ စီနီယာအဆငျ့ပွိုငျပှဲတှမှောလညျး ၁၄ ပှဲကစားရာမှာ ၆ ဂိုးသှငျးယူပွီး ဂိုးဖနျတီးမှု ၃ ကွိမျပွုလုပျထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘောလုံးပေးပို့မှု တိကမြှုနှုနျး ၇၈% ရှိသလို လိမျခေါကျဖွတျကြျောမှု ၃၂ ကွိမျအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ခံစဈစှမျးဆောငျရညျမှာလညျး ဖကျြထုတျမှု ၁၁ ကွိမျ၊ ကွားဝငျဟနျ့တားမှု ၁၀ ကွိမျနဲ့ အမွငျ့ဘောရယူမှု ၁၂ ကွိမျအထိ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တယျလို့ အခကျြအလကျတှကေ ဖျောပွနပေါတယျ။ Forbes ကတော့ မာတီနယျလီဟာ ဘယျနရော ရောကျရောကျ အတားအဆီးမရှိ ဂိုးသှငျးမယျ့ ကစားသမားမြိုးလို့ တငျစားခဲ့ပါတယျ။
နောကျပွီး မာတီနယျလီရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှဟော ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးက ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရို ၄၅ သနျးနဲ့ ချေါယူသှားတဲ့ ရိုဒရိုငျဂိုရဲ့ စှမျးဆောငျရညျထကျ သာလှနျနတေယျလို့ ဘရာဇီးလျမီဒီယာတှကေ နှိုငျးယှဉျသုံးသပျခဲ့ပွီး တနျကွေးကှာခွားရတဲ့ အကွောငျးအရငျးက ရိုဒရိုငျဂိုက ဆနျးတို့ဈအသငျးမှာ ကစားနတောကွောငျ့လို့ ဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
ဘရာဇီးလျ စတုတ်ထတနျးကလပျအသငျးတဈသငျးက ၁၈ နှဈသား ကစားသမားတဈယောကျအတှကျ လကျရှေးစငျ အိပျမကျနဲ့ ဥရောပထိပျတနျးလိဂျတဈခုကို ပွောငျးရှဖေို့ဆိုတဲ့ အခကျြတှဟော ဖွဈနိုငျခနြေညျးပါးလှနျးလှပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မာတီနယျလီကတော့ ဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျပွခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီမတိုငျခငျကတညျးက သူ့ရဲ့ နာမညျကို ဘရာဇီးလျတိုငျးပွညျတဈလှားမှာ ရပေနျးစားလာအောငျ ကွယျပှငျ့လေးက စှမျးဆောငျပွခဲ့ပွီဖွဈတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ ပွညျတှငျးပွိုငျပှဲမှာ အီတူယာနိုက ဆျောပျေါလိုအသငျးကို အနိုငျယူပွခြိနျမှာ မာတီနယျလီဟာ ဘရာဇီးလျဘောလုံးပရိတျသတျတှရေဲ့ ရငျထဲကို ရောကျသှားခဲ့တာလို့ Forbes ကဆိုပါတယျ။
မာတီနယျလီဟာ အာဆငျနယျနညျးပွ အမျမရီအတှကျ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈလကျနကျပုနျး တဈခုဖွဈလာမယျလို့လညျး သုံးသပျခံနရေပါတယျ။ လြှငျမွနျမှုနဲ့ အဆုံးသတျသခြောမှုက သူ့ရဲ့ အားသာခကျြဖွဈသလို တိုကျစဈမှာ နရောစုံကစားနိုငျမှုကတော့ အပိုဆုပါပဲ။ သူ့ရဲ့ အမွနျနှုနျးမွငျ့ ရှလြေ့ားမှု စှမျးရညျနဲ့ တဈဦးခငျြးဖွတျကြျောနိုငျစှမျးမွငျ့မားမှုက တဈခြိနျက တိုကျစဈမှူးဟောငျး သီယာရီ အှနျနရီကို ပွနျလညျ အမှတျရစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကစားသမားကိုယျတိုငျကတော့ သူ့အပျေါ လှမျးမိုးမှုရှိတဲ့ကစားသမားက စီ ရျောနယျဒိုလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒီကွယျပှငျ့ဟာ ဘယျဘကျခွမျးမှာ အမြားဆုံးထှကျကစားလရှေိ့ပွီး အထောငျတိုကျစဈမှူးနရောနဲ့ ညာတောငျပံတိုကျစဈတှမှောလညျး ကစားနိုငျသလို နောကျခနျြတိုကျစဈမှူးအဖွဈလညျး ကစားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူဟာ လာကာဇကျနဲ့ အူဘာမီယနျးတို့အတှကျ အရံသငျ့အစားထိုးနိုငျမယျ့ ကစားသမားဖွဈလာနိုငျသလို တောငျပံတိုကျစဈပွဿနာအတှကျ အဖွတေဈခုလညျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ခိုငျလုံတဲ့သတငျးအရငျးအမွဈတှအေရလညျး အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ Wonder Kid လို့ တငျစားခံနရေတဲ့ မာတီနယျလီကို အရံအသငျးကို စလှေတျတာမြိုး အငှားခတြာမြိုးပွုလုပျဖို့ အစီအစဉျမရှိဘူးလို့ သိရတာမို့ လာမယျ့ရာသီမှာ မာတီနယျလီ ဘယျလိုခွစှေမျးမြိုးပွသနိုငျမလဲဆိုတာကို စောငျ့ကွညျ့ရပါတော့မယျ။ မာတီနယျလီဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ရုံးကနျရတတျတဲ့ တောငျအမရေိကသားတှရေဲ့ လမျးစဉျကို လိုကျသှားမလား? အစဉျအလာဆိုးတှကေို ဖောကျထှကျပွခဲ့တဲ့ အဂူရို၊ ရီခြာလီဆငျတို့လို ကစားသမားမြိုးဖွဈလာမလား? ဆိုတာကို ပိတျကားပွငျပျေါမှာ ရှုစားကွရဖို့ မဝေးလှတော့ပါဘူး။